Izindaba - Izibuko zeDanyang City idatha yokuhweba kwamanye amazwe kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni 2020
Idatha yezingilazi zeDanyang City yokuhweba kwamanye amazwe kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni 2020
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, inani eliphelele lokungenisa nokuthekelisa izingilazi ze-Danyang kwakungu-US $ 208 million, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-2.26%, kubalwa u-14.23% wenani eliphelele lokungenisa nokuthekelisa iDanyang. Phakathi kwazo, ukuthekelisa izibuko kwakungamadola ayizigidi ezingama-189 zamadola aseMelika, ukwehla konyaka ngama-4.06%, kubalwa u-14.26% wenani eliphelele lokuthumela ngaphandle kweDanyang; ukungeniswa kwezingilazi bekungu-US $ 19 million, ukukhuphuka konyaka nonyaka ngama-26.26%, okubalwa ngo-13.86% wenani eliphelele lokungenisa iDanyang.
(Umthombo wedatha: IZhenjiang Customs Office eDanyang)
[Idatha] Isimo sokungenisa nokuthekelisa semikhiqizo yezingilazi kazwelonke ngokuhlukahluka kusuka ngoJanuwari kuya kuJuni 2020
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, ukuthunyelwa kwemikhiqizo yezibuko eChina (ngaphandle kwezinsimbi nemishini) kufinyelele ku-US $ 2.4 billion, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-13.95%. Kusukela ekuhlaziyweni kwezigaba zemikhiqizo ye-eyewear: ukuthekelisa izibuko zelanga, izibuko zokufunda namanye amalensi we-optical kwaba yi-US $ 1.451 billion, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-5.24%, okubalwa ngama-60.47% wengqikithi (okuthe ukuthunyelwa kwayo ngaphandle kwezibuko kwakungu-US $ 548 isigidi, ukwehla konyaka ngonyaka ngama-34.81%, okubalwa ngama-22.84% esewonke); Ukuthunyelwa kwamafreyimu kwaba ama-US $ 427 wezigidi, ukwehla konyaka ngonyaka ngama-30.98%, okubalelwa ku-17.78% wengqikithi; ukuthekelisa ama-lens wombukiso kwakungu-US $ 461 million, ukwehla konyaka ngonyaka kwe-15.79%, kubalwa u-19.19% wengqikithi.
Kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni 2020, ukungeniswa kwe-China kwemikhiqizo yezibuko (ngaphandle kwezinsimbi nemishini) kwakungu-US $ 574 million, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-13.70%. Kuhlaziyiwe kusuka emkhakheni wemikhiqizo yezingubo zamehlo: ukungeniswa kwezibuko zelanga, izibuko zokufunda namanye amalensi kube ama-US $ 166 million, ukwehla konyaka ngonyaka kwe-19.45%, kubalwa ama-28.96% esewonke;
Ukungeniswa kwamafreyimu wombukwane bekungamadola ayizigidi ezingama-58 zamadola aseMelika, ukwehla konyaka ngama-32.25%, kubalwa u-10.11% wengqikithi; ukungeniswa kwamalensi wombukwane nezikhala zawo kwakungu-US $ 170 million, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-5.13%, kubalwa u-29.59% wengqikithi; ama-corneal contact lens ayengu-US $ 166 million, ukwehla konyaka ngonyaka ngo-1.28%, i-Accounting ngama-28.91% esewonke.